Amin'ny olona fantatra voalohany amin'ny taratasim-pandraharahana dia mety hahatsapa fa sarotra loatra ny rafitra. Raha ny marina, karazana taratasy ara-barotra isan-karazany dia mifanaraka amin'ny filan'ny olona iray amin'ny fifandraisana.
Taratasy momba ny raharaham-barotra
Ny tetezana voalohany eo anelanelan'ireo mety ho mpiara-miombon'antoka amin'ny hoavy dia, raha ny lalàna, dia taratasy momba ny fiaraha-miasa. Ny solontenan'ireo orinasa roa ireo dia efa nahafantatra sy hitarika fifampiraharahana voalohany, saingy ny fifandraisana ofisialy dia ny taratasy momba ny fiaraha-miasa.
Hevitra manan-danja amin'ity rakitra ity:
miantso olona iray manokana;
Fanondroana ny fivoriana na loharanom-baovao momba ity orinasa ity;
Famintinana ny votoatin'ilay raharaha;
Ny tabila, ny vidiny ary ny fampahalalana fanampiny dia tsara kokoa ny mandefa ny fampiharana.
Lisitry ny asa fivoriana
Raha mahomby, ny dingana manaraka dia ny taratasy ara-barotra amin'ny fivoriana. Ity karazana taratasim-pandraharahana ity dia afaka mampihena ny isan'ireo dingana iraisan'ny fifampiraharahana ary hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny fivoriana ho avy. Ny antoko liana dia tokony handinika ny antsipiriany amin'ny antsipiriany kely indrindra:
resaka momba ny fifanakalozan-kevitra;
Manoritsoritra ny karazan-dingana faharoa mety hitranga mandritra ny dingana;
Manomana fampiharana fampahafantarana, izay azo ekena ho an'ny faritra hafa hamakiana alohan'ny fivoriana.
Ny taratasy fandraharaham-barotra toy izany dia hanampy amin'ny fisorohana ny tsy fifankazahoana, ny fifanoherana, ny fotoana hafa tsy mahafinaritra izay mety hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny fifampiraharahana. Mifototra amin'ny vokatry ny fifampiraharahana, misy taratasy ara-barotra hafa voasoratra momba ny fivoriana - saingy efa tamin'ny endrika tatitra momba ny vokatra azo. Izy io dia manatanteraka tanjona iray ihany koa: mba hahazoana antoka fa ny mpampiasa dia handika tsara ny fifanekena. Ny antoko faharoa dia asaina hanamafy ny minitra mandritra ny fivoriana na hanao fanitsiana, hoatra ny, mandritra ny andro iray.
Karazana taratasy fifanarahana ara-barotra hafa
Amin'ny fifandraisana efa misy, matetika, ireo karazana taratasy ara-barotra, toy ny taratasy fandraharahana ara-barotra-fangatahana ary, araka izany, ny valinteny ho an'ny taratasy. Miaraka amin'ny fiovana rehetra amin'ny fandaharana na rehefa ilaina ny fampahalalana fanampiny, ny orinasa iray dia mandefa taratasy fangatahana hafa.
Mba hanoherana ny fifandraisana ara-barotra misy na ny fametrahana ireo olona vaovao, ny karazana asa an-tsoratra toy ny taratasy fandraharahana ara-barotra-fanasana sy ny taratasy dokam-barotra raharaham-barotra. Ny orinasa dia afaka mandamina fivoriambe, fampiratiana, seminera ary ny sisa - ary manasa ireo mpiara-miasa marina sy mety, eo amin'ny fitantanana na ny ekipa iray manontolo. Ho mora kokoa ny mandefa taratasy mivarotra, fa ny fivoahana amin'izany dia ambany kokoa.
Ny etiquette momba ny varotra dia mirakitra taratasy fankasitrahana noho ny fahatanterahan'ny fangatahan'ny mpanohitra na ny fiaraha-miasa hafa.
Ny karazana fampitam-barotra sasany dia mety sarotra kokoa ny manoratra. Ireto ny:
taratasy fampandrenesana momba ny fandoavana;
taratasy fandraharahàna amin'ny fialan-tsiny;
taratasy fangatahana asa ara-barotra.
Ao anatin'ireo antontan-taratasy ireo, dia tena manan-danja tokoa ny hihazona feo mitongilana sy manaja. Raha ny taratasy fangatahana, avy eo, araka ny fitsipika momba ny etika ara-barotra, ny famolavolana fitarainana dia ampiasaina na amin'ireo tranga ireo rehefa hisy ny fangatahana eo amin'ny fiainana.
Inona no hitadiavana ny taratasim-pandraharahana:
fotoana iray manan-danja ho an'ny taratasy fandraharahana rehetra dia antso ho an'ny olona iray manokana, miaraka amin'ny famaritana marina ny anarana feno, ny toerana, ny anaran'ny orinasa;
na dia manoratra taratasy ara-barotra elektronika na taratasy iray aza ianao - dia tokony ho eo amin'ny taratasin-draharaha miaraka amin'ny fepetra rehetra ilaina;
etika, fahamarinana ary fanajana - ny hany azo ekena ho an'ny taratasy ara-barotra.
Ny taratasy dia tokony hanohanana amin'ny fomba maina sy ara-barotra - tsara kokoa ny misoroka ny fihodinan'ny fihetsiky ny olon-tsotra.
Ny taratasy fandraharaham-barotra, nosoratana tamin'ireny tsimok'aretina iny, dia hahatsapa tsara kokoa ny mpandefa anao. Ary eo amin'ny sehatry ny raharaham-barotra dia hanampy amin'ny fanokafana ny varavarana marina izany.
Fanombohana - inona no manomboka manomboka sy mihodina fanombohana?
Fandaniana fanampiny amin'ny fotoana malalakao
Trosa tsy mahazatra
Ahoana no hanokafana fivarotana voninkazo avy amin'ny scratch?
Fahitana mahagaga: nanambara ny mpahay siansa ny tanjona miafin'ny piramidan'i Maya!
Tato an-tanana - 76 safidy tsara sy tsara ho an'ny zazavavy
Ahoana no hambolena vary?
Fonosana hazo avy amin'ny hazo matevina
Feno fasana mahatsiravina 13, izay mila mitsidika ireo mpankafy tantara mampihoron-koditra
Anjan-kazo namboarina tamin'ny mpankafy tao anaty lafaoro
Ahoana no hamaritana ny habetsahan'ny tovovavy?
Acrylic modelling amin'ny fantsika
Ny rantsantanana dia ny peratra - ny sandany
Kakazo "Provansal" - ny sakafo tsara indrindra amin'ny sakafo sns